Lufthansa enables fast check-in with digital vaccination certificate | Airline News
Wararka Diyaaradaha • Wararka garoonka • Wararka Duulista • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Safarka Ganacsiga • Wararka safarka Yurub • Wararka Jarmalka • Caafimaadka Warka • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • dib u dhiska safarka • Warka Dalxiiska ee Masuulka ah • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Wararka Gaadiidka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Tiknoolajiyadda Safarka • Warka Safarka Safarka
Lufthansa waxay awood u siineysaa in si dhakhso ah loo hubiyo iyadoo la adeegsanayo shahaadada tallaalka dhijitaalka ah
Xilliga ay bilaabaneyso fasaxa xagaaga ee iskuulka Hesse: Lufthansa waxay awood u siineysaa in si dhakhso ah loo hubiyo iyada oo wata shahaadada tallaalka dhijitaalka ah
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Diyaaradaha » Lufthansa waxay awood u siineysaa in si dhakhso ah loo hubiyo iyadoo la adeegsanayo shahaadada tallaalka dhijitaalka ah
Xilliga ay bilaabaneyso fasaxa xagaaga ee dugsiga Hessian, rakaabka wata shahaadada tallaalka dhijitaalka ah ayaa mar kale si dhakhso leh ula hubin kara Lufthansa oo ay ku heli karaan kaarkooda diyaaradda.
Si dhakhso leh oo ka-hubin fudud oo leh shahaadooyinka tallaalka ugu dhakhsaha badan sidoo kale iyada oo loo marayo casriga.
Kahor hubinta shahaadooyinka Xarunta Adeegga Lufthansa oo suurtagal ah laga bilaabo 72 saacadood kahor bixitaanka.
Xilliga ay bilaabaneyso fasaxa xagaaga ee dugsiga Hesse.
In ka badan rubuc ka mid ah dadweynaha Jarmalka ayaa hadda laga tallaalay laba jeer COVID-19. Dhowr maalmood hadda, farmasiyada, dhakhaatiirta iyo xarumaha talaalka waxay soo saarayeen lambarrada QR ee dadka la tallaalay, waxa loogu yeero shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah.
Xilliga ay bilaabaneyso fasaxa xagaaga ee dugsiga Hessian, rakaabka wata shahaadada tallaalka dhijitaalka ah ayaa markale si dhakhso leh u hubin kara Lufthansa oo ay helaan kaarkooda diyaaradda. Waa kuwan sida ay u shaqeyso: Dadka socotada ah waxay soo bandhigaan shahaadada tallaalka dhijitaalka ah, taas oo cadeyneysa ka hortag buuxa oo tallaal ah, iyada oo loo marayo abka ama daabacaadda marka laga soo galo garoonka diyaaradaha. Halkaas, waa la akhriyaa oo kaarka lagu raaco ayaa si toos ah oo aan dhib lahayn loo soo saaraa. Tani waxay meesha ka saareysaa baahida loo qabo in waraaqo iyo caddeynno kala duwan loo qaado garoonka diyaaradaha. Waxa kale oo ay aad uga sii adkaynaysaa in si qaldan loo adeegsado shahaadooyinka tallaalka been abuurka ah, maaddaama nidaamku isbarbardhigayo xogta ka socota QR code iyo macluumaadka diiwaangelinta iyo rakaabka.
Mustaqbalka, jeegareeynta mobilka ee casriga ah sidoo kale wuu ka dhaqso badnaan doonaa waana sahlanaan doonaa: Wadooyinka la xushay, dhawaan ayey suurtogal u noqon doontaa in lagu baaro shahaadooyinka tallaalka QR ee barnaamijka Lufthansa ama loogu rakibo si dijitaal ah barnaamijka. Abku wuxuu aqoonsadaa nambarka QR wuxuuna adeegsadaa macluumaadkan si loo abuuro kaarka lagu raaco.
Qof kasta oo ka walwalsan in aysan haysan shahaadooyin sax ah safarka waxaa ku hubin kara Xarunta Adeegga ee Lufthansa duullimaadyada la xushay illaa 72 saacadood ka hor safarka. Kuwani waxay caddeyn u noqon karaan baaritaanka, ka badbaaday cudurka COVID-19 iyo hadda tallaallada. Xaqiijinta codsiyada gelitaanka dhijitaalka ah ayaa sidoo kale lagu hubin karaa sidan. Shirkada duulimaadka ayaa ku talinaysa in martideeda ay sii wataan shahaadooyinka asalka ah ee daabacan iyaga safarka, marka lagu daro cadeynta dhijitaalka ah, ilaa ogeysiis dheeri ah.